काठमाडौं – बिस्तारै जाडोयाम सु्रु हुँदैछ । जाडो याममा बिहान चिसो छ भनेर अल्छि मानेर बस्ने बानी पनि हुन्छ । जाडोयाममा शारीरिक अभ्यास गर्न अल्छी मानेर बस्दा शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने खतरा रहने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् ।
जाडो याममा घाम कम लाग्ने कारण शरीरले भिटामिन डी कम मात्रामा सोस्न पाउँछ ।
भिटामिन डीको कमी हुँदा शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न जान्छ । प्रशस्त मात्रामा घाम लागेको बेला शरीरले पर्याप्त मात्रामा भिटामिन डी सोस्न पाउँछ । यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने कारण कलेजो सम्बन्धी विभिन्न रोगहरु लाग्ने खतरा हुन्छ ।
नियमित शारीरिक अभ्यास गरेको खण्डमा कलेजो सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । मौसम अनुसार खानपिन अलग अलग हुनेकारण शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटबढ भइरहन्छ ।
मोटोपनबाट समस्याग्रस्त र मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिमा ८० प्रतिशतसम्म कलेजो सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
डा. सन्जय सिंहले भने ‘कलेजोले शरीरमा रहेको विषाक्त तत्वलाई हटाउने काम गर्छ । चिसोमा अल्कोहल पिउनु राम्रो मानिँदैन् । जाडोमा लसुन खाँदा यसले शरीरमा रहेको विषाक्त तत्वलाई हटाउँछ ।
त्यस्तै तपाईँले तपाईँले दैनिक शारीरिक अभ्यास वा योगा गर्ने, बोसो रहित खाना खाने, धुम्रपान नगर्ने, शरीरको तौल बढ्न नदिई कोलेस्ट्रोलको खतराको रोकथाम गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
कलेजो सफा गर्ने सेलेनियम र अलिसिन तत्वलाई बढाउन लसुनले मद्दत गर्छ । ग्रीन टी पिउँदा पनि शरीरमा रहेको विषाक्त तत्वलाई हटाएर लिभर सफा गर्ने काम गर्छ । बोल्डस्काई
हर्ड इम्युनिटीमा छैन वैज्ञानिक आधार, नयाँ पत्रमा गर...
कार्यालयमा गर्नुहोस् यस्तो व्यायाम, हुनेछ ‘चमत्कार’
डा. रवीन्द्र पाण्डेका अनुसार यस्तो हुनुपर्थ्यो स्वास्थ्य...
त्रिफला खानुका ४ फाइदा
सम्भव होला नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक ?